Solosaina kiosk Netkiosk | tsotra ny rindrambaiko kiosk!
Mpanjifa amin'ny 2019 (Chrome Kiosk)
Netkiosk 2019 (Lisitry ny 4)
Netkiosk 2019 (Loka fanampiny)
Fanavotana vola ho an'ny Netkiosk
Tongasoa eto Netkiosk
Netkiosk ho an'ny Windows | Solosaina Kiosk matihanina vita tsotra!
malefaka | Customization
Ny fifehezana sy ny fandriam-pahalemana amin'ny safidy ataontsika mifanaraka amin'ny azy.
malefaka | Ampiasao na aiza na aiza
Solosaina Kiosk mahery sy azo ampiasaina ho an'ny toerana rehetra.
Ny fifehezana rehetra amin'ny panel admin tsotra sy matanjaka | Apetraho ao anatin'ny minitra ny fitaovana kiosinao.
Mpandrindra sehatra Professional ho an'ny toerana misy azy.
Ny Netkiosk dia vahaolana lojika azo ampiasaina sy mahomby izay manampy anao amin'ny fiarovana sy fanakanana ny solosaina miaraka amin'ny pananana fanaraha-maso azo antoka. Tianao ho azo antoka fa tsy afaka miditra amin'ireo loharanom-pitaovana hafa ny mpampiasa anao noho ireo izay azonao. Azonao atao ny mametraka ny Netkiosk ho an'ireo mpampiasa anao mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ny fampiasana ny Netkiosk dia afaka manampy anao hifehezanao ny fiarovana ara-batana ny kiosk sy ny tambajotra ary hanome anao fiadanan-tsaina tanteraka. Amin'ny famerana ny fidirana amin'ny pejy manokana, ny torohay ary ny fampiharana mihitsy aza dia azonao antoka fa tsy afaka miditra amin'ny faritra voafetra ny mpampiasa azy. Ilainao fotsiny ny fahaiza-manaon'ny IT mba hampifanarahana ny Netkiosk. Netkiosk miasa amin'ny dikan-teny Windows rehetra. Afaka manova tanteraka ny Netkiosk izahay mba hifanaraka amin'ny zavatra ilainareo. Hanampy anao hamoaka ny ankamaroan'ny Netkiosk ianao amin'ny fanovana ireo fiovana ilaina azonao atao ny manao ny Netkiosk miasa any amin'ny toerana misy anao.
Ny tranokala ho an'ny angovo azo ampiasaina amin'ny tranokala natsangana dia manakana ireo karazana mety ho an'ny toerana rehetra.
Omeo fidirana amin'ny tranokala iray na maromaro amin'ny fomba fitehirizana fiarovana azo antoka.
Ny Standard Netkiosk dia vahaolana rindrambaiko feno tanteraka.
Afaka manidy avy hatrany ianao ary miantoka ny fitaovana Windows (s).
Azonao atao ny mihazakazaka ny Standard Netkiosk amin'ny tranokala fidirana amin'ny tranokala na ny sehatry ny kiosk. Azonao atao ny manitsy mora ny fampidinana ny sehatr'asa mpizahatany na tsena amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo amin'ny sehatra admin. Azonao atao ny manidy tranonkala manokana ary miaro izay ordinatera amin'ny fidirana ampahibemaso. Ampifanitsio tsotra ny adiresy URL izay afaka miditra sy mametra ny votoaty tsy mifanentana. Azonao atao ny mametraka izay vohikala ahafahan'ny mpampiasa mahazo miditra amin'ny sivana lisitra fotsy namboarina. Azonao atao koa ny manakana tranokala na teny fanalahidy amin'ny sivana ao anaty tranokala. Afaka manala na manafoana ny baoritra, ny bokotra ary ny safidinao ianao avy eo. Ireo mpampiasa dia tsy afaka miditra amin'ny tranonkala hafa.
Boky tranokala kafe.
Tafiditra amin'ny Admin.
Mihazakazaka eo ambonin'ny Windows.
Vonona ho ampiasaina amin'ny minitra
Hanova fotoana fohy.
Sivana ao anaty tranonkala.
Sarimihetsika matevina azo ampiasaina.
Custom na Windows OSK.
Hampiditra ny habeny 3.5 mb
Miasa amin'ny dikan-teny Windows rehetra.
Fampahalalana bebe kokoa. / Misintona fitsapana.
Fitaovana manokana (Chrome Kiosk)
Ny votoatin'ny No.1 natokana ho an'ny Chrome Chrome Chrome.
Atsaharo ny tranonkalanao amin'ny fomba mahazatra Chrome Chrome ary afeno ny PC.
Amin'ny 11 ny 10 novambra 2019 Netkiosk imperi dia hosoloina amin'ny Netkiosk imperi 2020. Jereo eto ny sary azo jerena eto ambany.
Amin'ny Netkiosk imperi na Chrome Kiosk dia afaka manidy ny solosainao avy hatrany ianao ary mihazakazaka Google Chrome amin'ny sehatr'asa fiarovana azo antoka. Ny Netkiosk imperi dia natao manokana mba hampandehanana ny Google Chrome amin'ny sehatry ny kioska azo antoka. Amin'ny alàlan'ny tambajotra azo antoka dia azonao atao ny mametra ny fidirana amin'ny tranonkala miaraka amin'ny sivana lisitra fotsy namboarina. Na dia manana safidy kodiaran'ny mpizara Chrome aza dia tsy avelanao hamaha ny fikandrana na ny fametrahana ny fitaovana windows. Ny tranonkala netkiosk imperi dia navotsotra voalohany tamin'ny fifidianana Espaniola tamin'ny Desambra 2015. Amin'ny Netkiosk imperi manodidina ny takelaka Windows 4000 dia mihazakazaka mafy ny Google Chrome. Maro amin'ireo mpanjifan'ny orinasa no mampiasa ny Netkiosk imperi mba hiarovana ny fidirana amin'ny daholobe na ny PC. Hatramin'ny volana mey 2019 Netkiosk imperi dia mbola vahaolana rindrambaiko tokana voafantina hanandrana ny Google Chrome amin'ny fomba kanto madio.
Vahaolana Chrome ao amin'ny Chrome.
Nakatona ny solosaina PC.
Afaho ny tranonkala 1.
Hampiditra ny habeny 10 mb
All versions of Netkiosk. Vidiny tsotra. Lisitry ny dikan-teny maro. Lisitry ny PC miavaka.
Ny Netkiosk 2019 dia ahitana ny dikan-teny Netkiosk amin'izao fotoana izao.
Miaraka amin'ny Netkiosk 2019 ianao dia mandoa iray lisansy amin'ny lisansa.
Manana ny dikan-teny rehetra ao amin'ny Netkiosk ianao ary mahazo lisansy PC ianao.
Anisan'izany (anisan'izany ireo programa mpanampy maimaim-poana)
Mpikambana sy 2019
Ny vahaolana rindrambaiko kiosk vaovao an'ny Chromium marika. Manome anao fifehezana sy haingam-pandeha ambony indrindra.
Netkiosk imperi 2020 no vahaolana rindrambaiko kiosk vaovao vaovao Chromium. Ny Netkiosk imperi dia mahery tahaka ny Google Chrome miaraka amin'ny tombony fanampiny amin'ny fahafahanao mihazakazaka banga tsindry kiosk na navigateur kiosk feno. Ny tontolon'ny admin azo antoka dia ahafahanao mifehy ny tranokala, lisitry ny fotsy sy ny filana votoaty ary ny blocking popup mahazatra. Netkiosk imperi dia manana fanalahidy fanalahidy manokana koa namboarina.
Netkiosk imperi dia miasa amin'ny dikanteny Windows rehetra.
Fampidinana kiosk misy ny tabilao sy fampisehoana.
Lisitry ny fotsy sy ny maro hafa…
Azo alaina tsy ho ela
Backbround Options Hevitra ato Anatiny
Netkiosk imperi 2020. Avoahy ny 11 Nov 2019.
Hizaha ny sarin'ny Netkiosk imperi 2020. Chromium Powered Kiosk Software.
Mpikambana sy 2020
Hizaha lalana (tsindry havanana. Misokatra amin'ny tabila vaovao)
Matoky ny maro hatramin'ny 2011.
Ny No1. Windows Kiosk Software.
Ny US sy ny governemanta hafa ao amin'ny governemanta ary ny fikambanana maro hafa manerantany dia mametraka ny fitokisany ao amin'ny Netkiosk.
Ny sasany amin'ireo mpanjifanaratsika izay vao haingana dia misy Porsche Leipzig, Daimler Alemaina, SMBC Bank Tokyo Japana ary Marks & Spencer fivarotana any UAE.
Bayer Pharmaceutical. Ny fametrahana ny Netkiosk any amin'ny orinasa maromaro any Azia.
Fifidianana Nasionaly Espaniola. 20th Desambra 2015: Famoahana Custom Netkiosk napetraka tamin'ny fitaovana 4000.
Fifidianana Ontario Kanada. 7th June 2018: Fitaovana Netkiosk ampiasaina amin'ny sehatra 25000.
Fifidianana Canada saskatchewan 2020. Vahaolana Netkiosk Custom.
Ny Netkiosk dia miasa amin'ny PC fotsiny 1.
Ny sasany amin'ireo mpanjifantsika
Jereo hoe iza no mampiasa an'i Netkiosk.
Daimler (Mercedes-Benz), Porsche, Marks & Spencer UAE, SMBC Bank Japan ary maro hafa.
Ny rindrambaiko Kiosk dia tsotra.
Ao amin'ny Netkiosk dia miresaka manokana amin'ny sofisty kiosk. Ny mpanjifantsika dia ahitana ny Governemanta, ny orinasa, ny fampianarana ary ny fikambanana hafa, lehibe sy kely. Netkiosk dia natsangana tao amin'ny 2011 miaraka amin'ny tanjona hamoahana rindrambaiko azo itokisana, azo hividianana sy azo vidiana. Ny filozofia fototra dia ny hahatonga an'i Netkiosk ho azo atao tsara indrindra, ary ny Software Kiosk maimaim-poana amin'ny alalan'ny fanatsarana tsy tapaka sy ny fanavaozana hendry. Ny fanavaozana ny mpanjifa dia nanampy ny Netkiosk ho iray amin'ireo vahaolana rindrambaiko malaza sy azo itokisana indrindra manerana izao tontolo izao. Ny fidiram-bola azo antoka dia manome fahafahana antsika hitazona ny current i Netkiosk ary azo antoka fa ny Netkiosk dia hiasa amin'ny tontolo manodidina ny Kiosk. Ny modely manokantsika tokana dia manome mpanjifa ny fahalalahana sy ny fahaiza-mangataka hangatahana fiovana na singa fanampiny arakaraka ny zavatra ilainy sy takiany. Manantena isika fa izany dia mamorona vahaolana mandresy ho an'ny rehetra
Fandraisana fanampiana Netkiosk
Etazonia (LA) + 1 (650) 614 1646
Copyright © Netkiosk kiosk rindrambaiko